lanolay | လမ်းအိုလေး
Microsoft Word ဖိုင်﻿ထဲတွင်﻿၊ အပြင်﻿ထုတ်﻿ထား﻿သော လျှာများ﻿ပေါ်တွင်﻿၊ ﻿နေပူထုတ်﻿လှမ်းထား﻿သော အဝတ်﻿များ﻿ပေါ်တွင်﻿ နင့်﻿နာမည်﻿ကို ငါ﻿ရေး၏။ ကမ္ဘာကို ပတ်﻿﻿နေ﻿သော ဆက်﻿သွယ်﻿﻿ရေးဂြိုလ်﻿တု﻿ပေါ်တွင်﻿၊ ဆရာဝန်﻿ ﻿ပေးလိုက်﻿﻿သော ﻿သောက်﻿﻿ဆေးများ﻿ပေါ်တွင်﻿၊ ကြည်﻿﻿အောင်﻿၏ ကဗျာစာအုပ်﻿ ﻿နောက်﻿﻿ကျောဖုံး﻿ပေါ်တွင်﻿ နင့်﻿နာမည်﻿ကို ငါ﻿ရေး၏။ ယင်﻿﻿ကောင်﻿တို့၏ အ﻿တောင်﻿များ﻿ပေါ်တွင်﻿၊ ﻿ဆောင်းရာသီ၏ အာ﻿ငွေ့﻿ပေါ်တွင်﻿၊ ဗာဒံရွက်﻿များ﻿ပေါ်နှင့်﻿ လမ်း﻿ခွေးတို့၏ နားရွက်﻿များ﻿ပေါ်တွင်﻿ နင့်﻿နာမည်﻿ကို ငါ﻿ရေး၏။ ငါကိုယ်﻿တိုင်﻿၏ အ﻿ရေပြား﻿ပေါ်တွင်﻿ နင့်﻿နာမည်﻿ကို ငါ﻿ရေး၏။ အခြားလူများ၏ အ﻿ရေပြား﻿ပေါ်တွင်﻿ နင့်﻿နာမည်﻿ကို ငါ﻿ရေးဖို့ စိတ်﻿ကူးယဉ်﻿၏။ မရရှိခဲ့﻿သော ﻿ပျော်﻿ရွှင်﻿မှုများနှင့်﻿ ရရှိခဲ့﻿သော အချိန်﻿များ﻿ပေါ်တွင်﻿၊ မရရှိခဲ့﻿သော အချိန်﻿များနှင့်﻿ ရရှိခဲ့﻿သော ﻿မွေးစာရင်းစာရွက်﻿တို့﻿ပေါ်တွင်﻿ နင့်﻿နာမည်﻿ကို ငါ﻿ရေး၏။ နင်﻿ ﻿သေဆုံးခဲ့သည်﻿၊ ထို့﻿နောက်﻿ အသက်﻿ဆက်﻿ရှင်﻿၏။
(David Cronenberg ၏ Maps to the Stars)
(ရုပ်﻿ရှင်﻿ကဗျာများ – ﻿မောင်﻿﻿ဒေး။ သြဂုတ်﻿၊ ၂၀၁၅ – နှစ်﻿ကာလများ။)
Categories: Kabyarz | Tags: Kabyarz, maung day, movie poems | Permalink.
ရုပ်﻿ရှင်﻿ကဗျာ – ၁၆ (﻿မောင်﻿﻿ဒေး)
နွေ အိမ်﻿ပြန်﻿လာ﻿သောအခါ ဇနီးဖြစ်﻿သူ မိုးကို မိတ်﻿﻿ဆွေဖြစ်﻿သူ ﻿ဆောင်းနှင့်﻿အတူ အိပ်﻿ရာ﻿ပေါ်တွင်﻿ ﻿တွေ့လိုက်﻿ရသည်﻿။ ﻿နွေသည်﻿ အံဆွဲထဲမှ ﻿သေနတ်﻿ကိုထုတ်﻿၍ ပထမ ﻿ဆောင်းနှင့်﻿ မိုးကို ပစ်﻿သည်﻿။ ထို့﻿နောက်﻿ ﻿သေနတ်﻿﻿ပြောင်းဝကို သူ၏ ပါးစပ်﻿ထဲသို့ ထည့်﻿လိုက်﻿သည်﻿။ ဤကား ရာသီဥတု ﻿ဖောက်﻿ပြန်﻿ခြင်း၏ အစဖြစ်﻿၏။ က﻿စော်﻿﻿ဖောက်﻿မှသာ အရက်﻿ကို ရ၏။ အချိန်﻿ကြာလာသည်﻿နှင့်﻿အမျှ သူ့ထက်﻿သူ လူစွမ်း﻿ကောင်းများ တစ်﻿﻿ယောက်﻿ပြီးတစ်﻿﻿ယောက်﻿ ﻿ပေါ်လာသည်﻿။ ဤသည်﻿က တရုတ်﻿သိုင်းကားထဲတွင်﻿ ဖြစ်﻿သည်﻿။ အပြင်﻿﻿လောကတွင်﻿မူ ﻿ယောကျာ်း၏ ညှဉ်းပန်းနှိပ်﻿စက်﻿ခြင်းကို ခံရ﻿သော မိန်းမအား မည်﻿သည့်﻿ လူစွမ်း﻿ကောင်းကမှ လာ၍မကယ်﻿ပါ။ အပြင်﻿ ၃၇မင်းသည်﻿လည်း အတွင်း ၃၇မင်းကို ﻿တော်﻿လှန်﻿ရန်﻿ ကြိုးပမ်း﻿နေရ၍ မအားလပ်﻿ပါ။ ကိုကြီး﻿ကျော်﻿သည်﻿ကား ဘီအီးဆိုင်﻿တွင်﻿သာ အချိန်﻿ကုန်﻿﻿နေသည်﻿။ ﻿နွေသည်﻿ ﻿သေနတ်﻿ကို ပါးစပ်﻿ထဲ ထည့်﻿ခဲ့﻿သော်﻿လည်း ခလုတ်﻿ကို မဆွဲဖြစ်﻿ခဲ့။ သို့﻿သော်﻿ ကွင်းပြင်﻿ကြီးတစ်﻿ခုဆီသို့ သွား၍ သူ၏﻿ခေါင်းကို ဆွဲဖြုတ်﻿လိုက်﻿သည်﻿။ လည်﻿ပင်းငုတ်﻿တိုကြီးမှ ﻿သွေးများ ပန်းထွက်﻿လာ၏။
(Carlos Regadas ၏ Post Tenebras Lux)
ရုပ်﻿ရှင်﻿ကဗျာ – ၂၂ (﻿မောင်﻿﻿ဒေး)
ကျွန်﻿﻿တော်﻿၏ ဝမ်းနည်း﻿နေ﻿သောစိတ်﻿ကို ကြက်﻿ကင်﻿ ဝယ်﻿﻿ကျွေးလိုက်﻿သည်﻿။ ဆိုင်းဘုတ်﻿များကိုင်﻿၍ စုရုံးစုရုံးလုပ်﻿﻿နေ﻿သော လူအုပ်﻿ကို စ﻿တော်﻿ဘယ်﻿ရီ အနံ့ပါ﻿သော သကြားလုံးများ ဝယ်﻿﻿ကျွေးလိုက်﻿သည်﻿။ ပိန်းရွက်﻿များ ခူး﻿ကျွေးလိုက်﻿သည်﻿။ လမ်း﻿ဘေးတွင်﻿ ခိုးကူး﻿ခွေများ လိုက်﻿လံဖမ်းဆီး﻿နေ﻿သော ရဲများကို ကာလ﻿ရွေ့လျားစက်﻿﻿ပေါ်သို့ တင်﻿၍ ကာလတရား၏ အပသို့ နှင်﻿လွှတ်﻿လိုက်﻿သည်﻿။ ယခုမျိုးဆက်﻿ကို ကျွန်﻿﻿တော်﻿ နားလည်﻿ချင်﻿﻿သောအခါ ဇလုံထဲသို့ ﻿ပေ﻿ရေ﻿နေ﻿သော အဝတ်﻿များကိုထည့်﻿ပြီး ﻿ရေ﻿နွေး﻿ဖျောရသည်﻿။ ပိန်းရွက်﻿များနှင့်﻿ အကြိမ်﻿ကြိမ်﻿ ﻿ဆက်﻿ဆံဖူးသည်﻿ဆိုလျင်﻿ ခင်﻿ဗျားကို ကျွန်﻿﻿တော်﻿၏ အ﻿ကောင်းဆုံး﻿ဖောက်﻿သည်﻿အဖြစ်﻿ သတ်﻿မှတ်﻿မည်﻿။ မာတင်﻿လူသာကင်း၊ ဗိုလ်﻿ချုပ်﻿﻿အောင်﻿ဆန်း စ﻿သော ﻿ခေါင်း﻿ဆောင်﻿များ လုပ်﻿ကြံခံခဲ့ရ﻿သော﻿ကြောင့်﻿ မြန်﻿မာလူငယ်﻿ ﻿တော်﻿﻿တော်﻿များများ ကဗျာ﻿ရေးလိုကြခြင်း ဖြစ်﻿နိုင်﻿သည်﻿။ ကျွန်﻿﻿တော်﻿သည်﻿ ကျွန်﻿﻿တော်﻿၏ ဝမ်းနည်း﻿နေေ﻿သာစိတ်﻿နှင့်﻿ ပလူးချင်﻿﻿သောအခါ သူ ကြည်﻿ဖြူလာ﻿အောင်﻿ တစ်﻿နာရီ﻿လောက်﻿ စည်းရုံးရသည်﻿။
(Wes Anderson ၏ Rush More)
ကမ္ဘာ﻿မြေကြီး – ၁၈ (ဧဧသန်း)
ရေတိမ်မှာ နစ်ခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီ မြန်မာပြည်
တစ်ယောက်တစ်မျိုး နိုင်ငံရေးစကား ခါးလွန်းလို့
ဧကန္တ ဧကန် ဧဝံမေသုတံ
အရှက်မကုန်သေးဘူး ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကြံဖန်အသက်ဆက်
Categories: Kabyarz | Tags: Aye Aye Than, ဧဧသန်း | Permalink.
(ပန်း﻿ဝေသီ မဂ္ဂဇင်း – ၁၉၉၇)
(ကမ္ဘာ﻿မြေကြီး ကဗျာစုစည်းမှု – ဧဧသန်း။ နိဒါန်းသစ်﻿စာ﻿ပေ၊ စက်﻿တင်﻿ဘာ ၂၀၁၇။)
Categories: Kabyarz | Tags: Aye Aye Than, ဧဧသန်း, Kabyarz | Permalink.
ကမ္ဘာ﻿မြေကြီး – ၁၆ (ဧဧသန်း)
ငြိမ်းချမ်း﻿ရေး မလိုချင်﻿ပါဘူး …. ဆို
အရိုးတစ်﻿﻿ဈေး အသားတစ်﻿﻿ဈေး ﻿ရောင်းစားချင်﻿﻿သေးတယ်﻿
အကုသိုလ်﻿﻿တွေ ထပ်﻿ခိုး﻿ပေါ် ခဏတင်﻿ထားလိုက်﻿
အကျင့်﻿က တူ တူ ﻿နေ﻿တော့
Categories: Kabyarz | Tags: Aye Aye Than, ဧဧသန်း, Kabyarz, The Earth | Permalink.
စိန်ဂေါ်လီတစ်ယောက် – ၈ (စိုင်းဝင်းမြင့်﻿)
လောကကြီးမှာ ဘယ်သူမှ မလိမ္မာဘူး
ဒိုင်နိုဆောတွေ တိုက်ခန်းတွေထဲ ဆက်နေလို့မရ
ဒရက်ကူလာတွေ နှစ်များစွာ အလင်းကို လေ့ကျင့်
ပန်းခြံခုံတန်းလျားမှာ ချစ်သူကို စောင့်နေကြသေးတယ်
Categories: Kabyarz | Tags: စိုင်းဝင်းမြင့်, Kabyarz, Sai Win Myint, SeinGawLi | Permalink.
စိန်ဂေါ်လီတစ်ယောက် – ၂ (စိုင်းဝင်းမြင့်﻿)
ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာ ပြင်ထားတဲ့ ထမင်းတွေဟင်းတွေ
အိမ်ရှေ့က ဓာတ်တိုင်မှာ ပုံပြီး
ငါပြန်မလာမချင်း ငါ့ရှေ့မှာ ခွေးချကျွေးဖို့စောင့်နေ
ငါကတော့ အဲဒီလို ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး
ရော့ မင်းစားတဲ့ ငါအသင့်ပြင်ထားတယ်တဲ့ အဖေက
လူတစ်ယောက်ကို ဝမ်းနည်းအောင်လုပ်တတ်တယ် အဖေက
စိုင်းဝင်းမြင့် ကဗျာပေါင်းချုပ် ဒုတိယအုပ် (၂၀၀၅ – ၂၀၁၆)၊ ကျော်မွှေးစာပေ၊ ၂၀၁၆။
စိန်ဂေါ်လီတစ်ယောက် – ၁ (စိုင်းဝင်းမြင့်﻿)
ဆဲဗင်းဇူလိုင်တုန်းက ဟိုထောင့်နားက လှမ်းပစ်တာ
ငါက ဒီနေရာလေးမှာ ရပ်နေတာ
အဲသည်တုန်းက ဦးချစ် လက်ဘက်ရည် မရောင်းသေး
နဂါးအမှတ်တံဆိပ် ကားဂိတ်လေးကနေ ကျောင်းရှေ့
ဦးချစ်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဖြစ်လာ ဘာတွေလဲ အဖေရာ
ငုဝါလမ်းပါ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းပါ အနော်ရထာလမ်းလို့ ပြောစမ်းပါ
ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာ သန်မြန်သူနဲ့ မြင်းပျံ
သစ်တောဝင်းအတွင်းဘက် သစ်တုန်းကန်မှာ ရေဆင်းကူး
အရင်လူမရှိတာနဲ့ အလှည့်ကျ ဆိုက်ကားသမားခေါ်သွား
ဆရာမက အဖေပြောင်းသွားပါလား ဆိုတဲ့အခါ
အုပ်ထိန်းသူ ဦးလေးတစ်ယောက်ပါခင်ဗျာ ပြင်ပြောရ
ငါတို့တုန်းက စစ်တပ်က လမ်းတစ်နေရာမှာတားပြီး
ဆံပင်ရှည်ကို နောက်လှန်ဆွဲစု ဘက်နက်နဲ့ ဖြတ်ချပစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ခေတ် တစ်တိုင် နှစ်တိုင်ထဲမှာ ပုံပြင်ပမာ
ကုလားသချိုင်းထဲမှာ သတင်းစာနဲ့ထုပ်﻿ထား ဆေးခြောက် ၅၀ သား
ဘယ်မှမပစ်ပဲနဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာ ကုန်သွား
မုန့်စားသူများ ကြက်သားကာလသားချက် ချက်စားသူများ
တချို့အချက်﻿အလက်﻿﻿တွေမှာ ကျွန်﻿﻿တော်﻿ပါ ပါ﻿နေတယ်﻿ (ဟိန်းမြတ်﻿﻿ဇော်﻿)
ဟေ့﻿ကောင်﻿ … ဟေ့﻿ကောင်﻿ … ဟေ့﻿ကောင်﻿ …
ငါပါ … ငါပါ … ငါပါ … ဟေ့﻿ကောင်﻿ …
ငါပါ … ငါပါ … ဟေ့﻿ကောင်﻿ … မြန်﻿မြန်﻿ … ﻿ဟေ့﻿ကောင်﻿ …
ကြားလား … ကြားလား … ﻿ဟေ့﻿ကောင်﻿ … ငါပါ … ငါပါ … ﻿ဟေ့﻿ကောင်﻿ …
ငါတင်﻿မကဘူး ဘုရားသခင်﻿ပါ ဒဏ်﻿ရာရလာတယ်﻿။ ﻿ဟေ့﻿ကောင်﻿ …
ငါပါ … ﻿ဟေ့﻿ကောင်﻿ … ငါပါ …။ ။
(Hein Myat Zaw @Facebook)